Qeybta 1: Apple Music xadeynta
Download Apple Music free la TunesGo
Apple Music waa mid ka mid ah ugu yaab leh geeyo music dhufto oo waa adeeg kaas oo aad ka heli karto malaayiin heeso iyo saldhigyada raadiyaha caalamiga ah in ay ku raaxaystaan ​​music aad ugu jeceshahay. Madal Tani waa lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan marka hore, laakiin waxaad u baahan tahay ka dib qori, waxa uu. Iyadoo ay run tahay in Apple Music waa adeeg cajiib ah, laakiin waxay leeyihiin a caqabado dhowr iyo xadadka. Waa habka geeyo music cusub oo waxaa la filayaa in Apple ugu dhakhsaha badan u keeni doonaa oo ku saabsan qaar ka mid ah isbedel loo baahan yahay waa in. Bal aynu eegno qaar ka mid ah xuduudaha u weyn ee Apple Music:
No Free // verohallinto taageeray heerka-mid ka mid ah jilicsanaanta ugu weyn ee Apple music waa in ay bixisaa / ad taageeray heerka free lahayn. Waa run in aan Apple waa shirkad taas oo galay advertising laakiin waxa ay ku bixiyeen karay kuwa diidan in ay bixiso ka sokow radio Beats1, Lugood Radio iyo Apple Music xirmaan.
Price- tabar kale oo waaweyn oo music Apple waa qiimihiisa. Waxaa soo eedeeyo $ 10 xubin shakhsiga ah iyo $ 15 xubin qoyska iyo ra'yiga guud waa in qiimaha tan waxa ay la kabay waxoogaa yar.
La'aanta exclusives- tabar kale ama xaddidaadda of music Apple waa la'aanta ah ee exclusives. Waa in ay ku bixiyeen nooc ka mid ah content gaar mayor kuwa lacag bixisid si aad u isticmaasho.
Devices- Limited Apple music hadda laga heli karaa oo keliya qalabka Apple iyo PC laakiin aan ku Android iyo madallo kale. Waa run in version ah Android dhowaan la bilaabi doonaa, laakiin weli qalab xaddidan iyo taageero qaab waa xaddidaadda kale.
Qeybta 2: Download Apple Music free la TunesGo
Wondershare TunesGo waa madal taasoo u fududaynaysa in aad wareejiso music iyo nooc kasta oo files ka mid qalab in kale. Waa habka ah in lagala soo bixi karaa qalabka macruufka iyo halkan ka dhigaysa kala iibsiga ee warbaahinta iyo faylasha kale sahlan oo dhakhso ah. Madal Tani waxay taageertaa muuqaalada dad badan oo cajiib ah oo ka mid ah kuwa lagu xusay hoos ku qoran:
Guuritaanka warbaahinta ka iDevices in computer iyo ku xigeenka qeybsanaan noqdo fudud madal this iyada oo loo marayo. TunesGo u ogolaanaya ma aha oo kaliya inta u dhaxaysa kala iibsiga qalabka Apple laakiin Android sidoo.
TunesGo wax fudud in aad ku darto oo ay ku jiraan warbaahinta Podcasts iyo Lugood U qalabka adiga oo aan isticmaalka Lugood.
Taas ayaa ka dhigaysa adeega beddelaad music iyo video aad u fudud oo iyaga badasha qaababka taas oo laga heli karaa qalabka Apple oo ku Apple music app.
Wondershare Adeeg TunesGo ka caawisaa in uu abaabulo iyo maarayn music iyo aad u saamaxaaya in ay abuuraan playlists kuu gaar ah oo ku saabsan iPod, iPhone iyo iPad iwm
Madal Tani cajiib ah ka shaqeeyaa sidii kale Lugood iyo san yahay, kuwa waa ku adagtahay si ay u gudbiyaan oo la maareeyo warbaahinta on qalabka ay macruufka.
TunesGo wax fudud in aad dib ilaa faylasha aad ay dhacdo in uu jiro nooc ka mid ah nidaamka failure ama shil iyo nuqulada xogta si deg deg ah dib ugu soo qalab aad.
Oo sidaas ha loo odhan karaa in TunesGo waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee Apple downloader music ah oo aan wax la dhaafi karin.
> Resource > Music > Best App Apple Music Downloader